काठमाण्डौ । व्यवस्थापिका–संसद्, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । सो विधेयकमा परेका संशोधनमा आजको बैठकमा छलफल भई पारित भएको हो । सो विधेयक अब संसद्को मूल बैठकमा चाँडै पेस हुनेछ । निर्यात प्रवर्द्धनका माध्यमबाट...
विद्युत महसुल वृद्धिको निजी क्षेत्रबाट पनि विरोध, सिएनआई भन्छ–‘पहिला चुहावट नियन्त्रण गर’
काठमाण्डौ । विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको सिफारिस अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साउनदेखि विद्युत महसुलमा गरेको वृद्धिको पहिलोपटक निजी क्षेत्रबाट विरोध भएको छ । विद्युत महसुलको बिषयमा निजी क्षेत्रसँग सम्बद्ध संघसंस्था मौन रहेको बेला नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)ले मंगलबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै बढाइएको महसुल तत्काल...
एनसेल कर प्रकरणको यस्तो छ भित्री कथा !
काठमाण्डौ । विदेशी लगानीमा संचालित देशकै सबैभन्दा ठूलो दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले कर छली गरेको बिषय विगतमा भाइरल भयो । एनसेलको खरीदबिक्रीको क्रममा उठेको मुद्धालाई ‘एनसेलले सरकारलाई कर नै नतिरेको’ भन्दै सडक र संसदबाट उरालियो । सबैतिर एनसेलले ‘नेपाल सरकारलाई कर नै तिरेन’ भन्ने बिषयलाई भाइरल बनाएर सामाजिक सञ्जालमा समेत...
अब १० पैसामै एनसेलको इन्टरनेट !
काठमाण्डौ । एनसेलका ग्राहकले अब रातको समयमा अझै सुलभ दरमा डाटा सेवाको उपयोग गर्नसक्ने भएका छन् । देशकै अग्रणी मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले आफ्ना ग्राहकका लागि ईन्टरनेट सेवा करबाहेक १० पैसा प्रति एमबिसम्म प्रयोग गर्न सकिने गरी ‘नाईट डाटा प्याक’को अफर ल्याएको छ । असार १५(बुधबार)देखि सुचारु हुने यो योजनामा ग्राहकले आफ्नो...
लगानी बोर्डको सीइओमा महाप्रसाद अधिकारी
काठमाण्डौ । निकै लामो समयपछि लगानी बोर्डले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ) पाएको छ । सरकारले सो पदमा राष्ट्रबैंकका निवर्तमान डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको हो । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सो पदका लागि अन्तिम प्रतिस्पर्धामा रहेका लगानी बोर्डका पहिलो सीइओ राधेश पन्तलाई पन्छाउँदै अधिकारीलाई सो पदमा...
नयाँ आपूर्ति नीति बनाउन सरकार तयार
काठमाण्डौ । देशको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाउन अविलम्ब समयसापेक्ष नयाँ आपूर्ति नीति बनाएर जारी गर्न सरकार तयार भएको छ । बुधबार आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनको अध्यक्षतामा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिमण्डलबीच सिंहदरबारमा भएको बैठकमा सरकारले यस्तो तत्परता देखाएको हो...
मोवाइल एक्स्पोको ८ दिनमा ५० लाखको कारोबार
काठमाण्डौ । काठमाण्डौंको नयाँ बसपार्कमा केही समय अघि सञ्चालनमा आएको बीजी मलमा मोबाइलका पारखीहरुलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको मोबाइल एक्स्पोमा ५० लाख रुपैंयाको कारोबार भएको छ । मोबाइल एक्स्पोको आठौं दिनसम्ममा २५ हजार बढीले अवलोकन गरिसकेका बताइएको छ । हरेक मोबाइलको खरिदमा हात खाली नजाने उपहार’ योजना सहित बीजी मलले मोबाइल एक्स्पोको...
एनसेलले ल्यायो ‘डे भ्वाइस प्याक, ८ रुपैयाँमा ३० मिनेट टक टाइम
काठमाण्डौ । एनसेलले आफ्ना ग्राहकका लागि नयाँ योजना ‘डे भ्वाइस प्याक’ ल्याएको छ । एनसेलका पि्रपेड ग्राहकले ३० मिनेट अन-नेट टक टाइम करसहित ८ रुपैयाँमा खरिद गर्न सक्छन् । यो भ्वाइस प्याक योजना बुधबार अर्थात असार ८ गतेदेखि लागू हुनेछ । यस योजनाअन्तर्गत एनसेलका पि्रपेड ग्राहकले ३० मिनेट Ncell-Logoअन-नेट टक टाइम रहेको भ्वाइस प्याक करसहित ८...
पूर्वअर्थमन्त्री र उद्योगीको एउटै प्रश्न–‘एनसेल टावरको आक्रमणकारीलाई कारबाही गर्ने कि वैदेशिक लगानी भड्काउने ?’
काठमाण्डौ । दूरसंचार प्रदायक कम्पनी एनसेलमाथिको नियोजित आक्रमणको मुख्य दोषी अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव माओवादीका केही कार्यकर्तालाई विभिन्न जिल्लाबाट पक्राउ गरे पनि उनीहरुमाथि कडा कारबाही हुन सकेको छैन भने एनसेलको टावर पड्काउने कार्यमा संलग्न पार्टीको मुख्य नेता विप्लवलाई पक्राउ गर्न राज्यले...
उद्योग वाणिज्य महासंघमा चोर बाटोबाट भवानीलाई अध्यक्ष बनाउने खेल !
काठमाण्डौ । व्यापारी तथा आफ्नै सदस्यलाई अनेक झमेला पर्दा सो बिषयमा एक शब्द नबोल्ने पशुपति मुरारका नेतृत्वको उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र षड्यन्त्र र तिकडमहरुको चाहि कुनै कमी छैन । व्यापारी र व्यवसायीको पक्षमा नबोले पनि मुरारका नेतृत्वको समूह आफ्नो दूनो सोझ्याउने खेलमा भने अनवरत लागि नै रहेको तथ्यहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् ...
विदेशी बिस्कुट लञ्च गर्दै उद्योगमन्त्रीले भने-'विकासका लागि युवाको परिचालन अपरिहार्य'
काठमाण्डौ । उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले मुलुकको विकासको लागि युवा शक्ति परिचालन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल चेम्वर अफ कमर्समा गठित युवा उद्यमी मञ्चद्वारा बुधबार चेम्वर भवनमा आयोजना गरिएको ‘युनिविस विस्किट्स’को लञ्च कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उद्योगमन्त्री पाण्डेले सो कुरा बताएका हुन् । पाण्डेले नेपालमा...
टेलिकमको फाइबर टु द होम सेवाको महसुलमा परिमार्जन
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले फाइबर टू द होम(FTTH) सेवाको महसुल दर परिमार्जन गरेको छ । टेलिकमले २०७३ आषाढ ३ गते देखि FTTH सेवाको महसुल दरमा परिमार्जन गरेको हो । यस अनुसार प्याकेज बिक्री वितरण, CPE महसुल तथा अप्टिकल फाइबरको दर निम्न बमोजिम रहेको टेलिकमले जनाएको छ । FTTH सेवामा निम्नानुसारको प्याकेज मात्र बिक्री वितरण गरिने भएको छ : यस्तैगरी हाल...
इटहरीमा व्यापारीका नेता चुन्न स्थानीय निर्वाचन भन्दा ठूलो प्रचार र दौडधूप !
इटहरी । दुई महिनाअघिदेखि नै घरदैलो र चुनावी प्रचार अभियान । अनेकन टोलीहरु व्यापारीको घर–घरमा पुग्ने क्रम कयौ दिनअघिदेखि जारी छ । जेठ–असारको उखरमाउलो गर्मीको समेत परवाह नगरी घामले भूंग्रो झै बनेको तातो सडकमा अरुबेला एसीलाई माया गर्ने व्यापारीहरु खलखली पसिना हुँदै उत्रिएका छन् । झट्ट सुन्दा र दृृश्य हेर्दा लाग्नसक्छ, यो कुनै ठूलै...
चिनियाँ उद्योगीको टोली विराटनगर र दमकमा, क्लिन इण्डष्ट्रियल पार्क र जलविद्युतमा लगानी गर्ने
काठमाण्डौ । चीनका उद्योगी व्यवसायीको एक टोलीले झापाको दमकमा क्लिन पार्क औद्योगिक करिडर र ५४२ फिट अग्लो बुद्धको मूर्ति निर्माणमा लगानी गर्ने भएको छ । चिनियाँ ग्लोबल एनजीओ युनियनका उपाध्यक्ष चउ हुई जोनको नेतृत्वमा दमक आएका नौ सदस्यीय टोलीले राष्टिय गौरवको योजनाको रुपमा हेरिएको १० अर्ब बढी लगानीमा बनाइने भनिएको क्लिन पार्क औद्योगिक...
एनसेलको २ दर्जन बढी स्टेशन ध्वस्त पारेपछि विप्लवको सरकारलाई खुल्ला चुनौति-'याद गर, तिम्रा जस्तोसुकै टावर ध्वस्त पार्न सक्छौ !'
काठमाण्डौ । पूँजीगत लाभकरको मामलाबाट सुरु भएको एनसेल विवाद अहिले उसका टावरमाथि भइरहेको आक्रमणका कारण ‘डाइभर्ट’ भएको छ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले ठाउँ–ठाउँमा एनसेलको रिपिटर टावरमाथि आक्रमण गरी ध्वस्त पार्न थालेपछि जनयुद्धकालीन अवस्थाको मात्र सम्झना गराएको छैन, देशमा लगानीको वातावरण खलबलिने खतरा समेत...
रसुवागढी भन्दा साञ्जेनमा लगानीकर्ताको मरिहत्ते, कति आयो आवेदन ?
गणपति माइक्रोफाइनान्समा थामिनसक्नु आवेदन, दोश्रो दिनसम्म कति पर्यो ?